Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ)
Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Basal ganglia သည် ဦနှောက်အတွင်းမှ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများစုပေါင်းထားသောအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Basal ganglia ရောဂါသည် ထိုအုပ်စု က မလိုလားအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖိနှိပ်ရန်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓါအပေါ်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန် ဆုံးရှုံးသောအခါ ဖြစ်ပွားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှု ပျက်ပြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လှုပ်ရှားမှုပျက်ပြားခြင်းသည် basal ganglia နှင့်အသက်ဆိုင်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းသုတေသနပြုလုပ်မှုများ က basal ganglia ရောဂါသည် စွဲလန်းခြင်းရောဂါ (obsessive compulsive disorder) နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသံပိုင်းဆိုင်ရာထစ်ခြင်း (Tourette syndrome) တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ပြသပါသည်။ ဤရောဂါသည် အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားသော်လည်းအသက်ကြီးသောသူများတွင် ပို၍ဖြစ်ပွားပါသည်။
သို့သော် အန္တရာယ် ရှိသောအချက်များကိုလျော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကိုထိန်းချုပ် နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသောအချက် အလက် များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Basal ganglia ထိခိုက်ခြင်းသည် စကားပြောခြင်းလူပ်ရှားခြင်း နှင့် ကိုယ်နေကိုယ်ထားတို့ကိုထိန်းချုပ်သော ပြဿနာများကိုဖြစ်စေပါသည်။ဤရောဂါလက္ခဏာများကိုပေါင်းပြီး Parkinsonism ဟုခေါ်ပါသည်။
Basal ganglia ချို့ယွင်းချက်ရှိသောသူများသည် လှုပ်ရှားမှုများစတင်ရန် ရပ်တန့်ရန် ထိန်းထားရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ဦးနှောက်၏ ထိခိုက်ခံရသောနေရာပေါ်မူတည်၍ မှတ်ညဏ် သို့မဟုတ် အခြားတွေးခေါ်ခြင်းနှင့် ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုထိခိုက်စေပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာများသည် ကွဲပြား၍ အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ကြွက်သားများအကြောဆွဲခြင်း နှင့် တင်းမာခြင်း
ထိန်းချုပ်မရသောထပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ (စကားများသို့မဟုတ် ငိုခြင်းများ)
Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဦးနှောက်ကိုဒဏ်ရာရစေသောအချက်များသည် basal ganglia ကိုထိခိုက်စေပါသည်။ ထိုအချက်များမှာ
ကြေးနီမန်းဂနီး နှင့် အခြားလေးလံသောသတ္တုများအဆိပ်သင့်ခြင်း
ဤတွေ့ရှိချက်များ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းသည် စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ရောဂါကိုကုသသောဆေးများ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါအချက်များရှိပါကbasal ganglia ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို မြှင့်တက်စေပါသည်။
Dystonia ( ခန္ဓါကိုယ် ကြွက်သားများတောင့်တင်းသည့် ပြဿနာ)
Huntington disease ( ဦးနှောက်အချို့နေရာရှိ အာရုံကြောဆဲလ်များပျက်စီးသည့် ရောဂါ)
Progressive supranuclear palsy (ဦးနှောက်တွင်းမှ အချို့အာရုံကြောဆဲလ် များပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်သောလှုပ်ရှားမှု ပျက်ပြားခြင်း)
Wilson disease (ခန္ဓါကိုယ် တစ်ရှူးများထဲတွင် ကြေးနီသတ္တုများများပြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါ)
Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်ကသင့်တွင် ဤရောဂါရှိသည်ဟုသံသယရှိပါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများ နှင့် အချို့ ဆေးစစ်ခြင်းများကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ ဆရာဝန်သည် သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းကိုလည်းမေးမြန်းပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသောအသုံးများသောစမ်းသပ်မှု အချို့မှာ –
ဦးခေါင်းအား CT နှင့် MRI ရိုက်ခြင်း
Magnetic resonance angiography ( လည်ပင်းနှင့် ဦးနှောက် ရှိသွေးကြောများအား ကြည့်ရန်)
Position emission tomography (PET) (ဦးနှောက်၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို ကြည့်ရန်)
သွေးတွင်းသကြား၊ သိုင်းရွိုက် လုပ်ငန်း၊ အသည်းလုပ်ငန်း နှင့် သံဓါတ်၊ ကြေးနီဓါတ် ပမာဏများကိုစစ်ဆေးရန် သွေးစစ်ခြင်း
Basal Ganglia Disease (ဦးနှောက်ရှိ ဘေဆယ်ဂန်ဂလီယွန် ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းကိုမူတည်၍ ဆရာဝန်သည် ကုသမှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ ကုသမှု သည် ဆေးပေးခြင်းသို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကbasal ganglia ရောဂါကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ အကျိုးရှိသောနည်းလမ်းများသည် ရောဂါကာကွယ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သုံးလတစ်ကြိမ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါ။
Basal ganglia disease. https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_ganglia_disease.
Accessed 19 Feb, 2017.
Basal ganglia disease. https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_ganglia. Accessed9Feb, 2017.Basal ganglia disease. https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_ganglia_disease.
Basal ganglia disease.https://medlineplus.gov/ency/article/001069.htm. Accessed 19 Feb, 2017.
Basal ganglia disease. https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_ganglia. Accessed9Feb, 2017.